Tirada shilalka ka dhacay magaalada Muqdisho oo la shaaciyay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaTirada shilalka ka dhacay magaalada Muqdisho oo la shaaciyay
Hiiraan Xog, Taliska hogaanka ciidamada nabad galyada waddooyinka ee Taraafikada ayaa maanta soo bandhigay shilalkii ka dhacay magaalada Muqdisho sagaalkii bilood ee la soo dhaafay.
Taliyaha hogaanka ciidamada nabad galyada waddooyinka Generaal Axmed Xassan Maalin ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ka dheceen shilal gaaraya 875, asaga oo tilmaamay 602 ka mid ah shilalkaas in ay galeen gaadiidka yar yar ee mooto bajaajta.
“Shilalka ugu badan ee dhacay sagaalkii bilood ee la soo dhaafay waxay garayaan 875 shil, 602 ka mid ah waxaa galay mooto bajaaj, waxay geysteen dhimasho iyo dhaawac”ayuu yiri generaal Axmed Xassan .
Taliye Axmed Xassan ayaa tilmaamay in 8 ruux ay ku dhinteen shilalkii ka dhacay Muqdisho ee la diwaan geliyay.
Generaal Maalin ayaa xusay in shilalka ugu badan ay dheceen bishii la soo dhaafay ee September kuwaas oo gaaraya ilaa 98 iyadoo 73 ka mid ah ay galeen mooto bajaaj.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa wareegto ku mamnuucay in mooto bajaajyo cusub laga soo dejiyo dekedda Muqdisho asaga oo ku sababeey cabashada laga soo gudbiyeey oo badatay.
Shilalka gaadiidka ayaa loo aaneeya darawalada oo aan aqoon badan u laheyn kaxeynta gaadiidka iyo iyaga oo si xad dhaafka ah kuwa wada taasoo keenta shilalka ugu badan.